Camera-Goorn Camera: Xeelado Ka Caawin doona Isbitaalada | Xalka OMG
Kaameradda-Worn Camera: Waa farsamooyin caawin doona cisbitaalada
Dunida oo dhan, dadku waxay u galaan cusbitaalka maalin walba iyadoo ay yihiin dhibanayaal toogasho, mindiyo, iyo garaacis, iyo sidoo kale baahiyaha caafimaad ee aan rabshadaha la xiriirin. Qaar badan ayaa loo oggolaadaa daryeelka muddada-gaaban ama muddada-dheer. Meelaha dadku sida badan u buuxaan, rabshaduhu maahan wax la filaa. Mararka qaarkood bukaanku si xun ayey ula dhaqmaan shaqaalaha, saraakiisha sarsare waxay ku qayliyaan dadka da'da yar ama dadka aan la xiriirin waxay galaan isbitaallada waxayna abuuraan rabshado.
Marka loo eego daraasad ay sameysay Ururka Caalamiga ah ee Daryeelka Caafimaadka iyo Amniga (IAHSS), ku dhawaad ​​80% isbitaallada waxay u baahan yihiin nidaamyo xakameyn iyo kor u qaadista CCTV. Maamulayaasha daryeelka caafimaadka iyo khabiirada amniga waxay u baahan yihiin inay keenaan xalka ilaalada fiidiyowga ee la xoojiyay si loo ilaaliyo bukaanka, booqdayaasha, kalkaaliyayaasha, dhakhaatiirta, iyo shaqaalaha isbitaalada, xafiisyada, xarumaha ambalaaska, iyo xarumaha daryeelka muddada-dheer.
Kaamirooyinka jirka xiran ayaa lagu soo bandhigay isbitaalada si loo wanaajiyo badbaadada shaqaalaha caafimaadka. Kaamirooyinka waxaa loogu talagalay inay u diraan farriin cad oo dulqaadasho eber ah kuwa ku xadgudba ama weerara shaqaalaha Isbitaalka.
Kuwani aaladaha waxay bixiyaan xisaabtan weyn oo ku saabsan is dhex galka shaqaalaha ambalaaska iyo bukaanka. Kalkaaliyayaasha caafimaadku waxay si joogto ah isu dhigaan xaalado adag oo khatar ah. Kamarada ayaa gacan ka gaysatay la shaqeynta asxaabta booliska si loo hubiyo in talaabo laga qaado ka dib ficil kasta oo dambi ah oo lagula kaco shaqaalaha ama aaminaada. Kaamirooyinka jirka ayaa halkan ka caawiya iyagoo bixinaya muuqaalo fiidiyow oo dhexdhexaad ah oo amni ah dhacdooyinka laga soo arko safka hore. Muuqaalka fiidiyowga waxaa lagu kaydiyaa kaar aamin ah oo SD ah kaas oo hadhow loo isticmaali karo caddeyn la aqbali karo maxkamadda.
The duubista kaamirooyinkaas waxaa loo isticmaali karaa tababbarka iyo tababarka, sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta nidaamka caafimaadka. Shaqaalaha ambalaaska ayaa waliba si la mid ah uga faaiidaysan kara dib-u-eegista duubista si loo wanaajiyo jawaabtooda xaaladaha iyo helitaanka jawaab-celin waqtiga-dhabta ah si ay uga caawiso samaynta go'aannada nafo lagu badbaadinayo. Kaamirooyinka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa tababbarka loogu talagay xubnaha shaqaalaha cusub oo lagu tusayo habab qaas ah iyo sida looga jawaabo.
Kalkaaliye caafimaad Waxay wajahayaan jirdil xagga afka ah iyo jir ahaan ah inta ay kujiraan waajibaadka, kaamirooyinkaani waxay caawinaad ka geystaan ​​helida dadkaas. Kaamirooyinka jirka xirta waa xulasho caan ah safka hore ee shaqaalaha. Shaqaalaha Paramedic waxay naftooda u huraan sidii ay u difaaci lahaayeen una daryeeli lahaayeen dadka waqtigooda ugu baahida badan isla markaana qofkasta oo ka mid ah uu ku dhici karo dagaal ama gacan ka hadal gabi ahaanba waa cadaalad darro.
Caqabadaha horyaalla isbitaallada
Bixinta nabadgelyo wanaagsan bukaanka, booqdayaasha, iyo shaqaalaha
U hoggaansanaanta awaamirta dowladda iyo caqabadaha amniga
Ka difaacida sheegashada beenta ah iyo dacwad ku qaadista
Ka gudubka cadaadiska miisaaniyada
Isku-darka xakamaynta marin-u-helka iyo qaab-dhismeedka baaritaanka fiidiyowga
Alaabada Kamaradaha jirka lagu xiro ee OMG
Caafimaadka, qaab-kaydinta heer sare ah ee qaababka qalabka oo dhan
Ku nool si aad ula socoto nidaamka GPS-ku dhisan
Kaydinta kaadhka xusuusta SD
Muuqaalka tooska ah ee loo maro 4G
Muuqaalku waa qarsoon yahay oo lama qori karo
Muuqaalkan cajalka ah waxaa la hayaa muddo 31 maalmood ah haddii aan codsi laga dhigin in la sii haysto illaa muddo dheer
Waxaan bixinaa aaladda, qalabka wax baara, baarayaasha, teleefoonka, teknolojiyadda wireless iyo aaladaha raadinta guriga ee waqtiga-dhabta ah iyo dalabkooda loogu talagalay dhakhaatiirta.
Kaamirooyinka jirka waxay leeyihiin karti ay ku horumariyaan waxqabadka iyo qanacsanaanta dhammaan noocyada kala duwan ee shaqada. Haddii daraasado la sameeyo shaqaalaha amniga, tusaale ahaan, kaamirooyinku waxay caddeeyeen inay saameyn liidata ku leedahay xubnaha gardarada ah ee dadweynaha. Tani, iyadu, waxay hagaajisay qanacsanaanta shaqada iyadoo ka dhigaysa shaqaalaha inay dareemaan nabadgelyo xagga shaqadooda. Fiidiyowga hoose wuxuu si cad u muujinayaa tan.
Haddii sawiradu u qalmaan kun eray, fiidiyowgu wuxuu u qalmi karaa malaayiin. Live-streaming awoodaha kamaradaha, waxay u oggolaadaan dhakhaatiirta goobta ka baxsan inay talo caafimaad siiyaan dhakhaatiirta caafimaad ee ka qaybgalaya kiisaska adag ee dhulka, haddii loo baahdo.
Hospitals waxay gaar u yihiin caqabadaha amniga ee gaarka u ah warshadaha gaarka ah ee dhammaantood lagu soo wada uruuriyo hal urur. Marka lagu daro aagagga guud, isbitaalada badanaa waxay leeyihiin makhaayado, dukaamo hadiyado ah, farmashiyeyaal, haya unugyo loogu talagalay daaweynta maxaabiista iyo aagagga daweynta cudurka dhimirka dhamaantoodna soo bandhigaya shuruudaha teknolojiyadda gaarka ah. Sidaas darteed, isku darista aaladaha amniga ee fulinta sharciga OMG inta badan way ka balaadhan yihiin kuwa alaabada kale. Fiidiyowga, xakamaynta gelitaanka, digniinta digniinta, kaamirooyinka jirka xirtay, iyo aalado kale ayaa la gayn karaa oo la isugu dari karaa barnaamijka amniga ee isbitaalka.
Meelaha gawaarida la dhigto u baahan tixgelin gaar ah. Ahaanshaha 24 -waa maalin shaqo, maalinlaha gawaarida gawaarida cisbitaalka waxay la kulmi karaan dhaqdhaqaaq joogto ah, taasoo adkeyneysa dabeecadda shakiga inay adkaan karto in la ogaado habeenkii. Ka sokow ka hortagga tuugada iyo dembiyada kale, ilaalada isbitaalku waxay hubiyaan in shaqaalaha iyo bukaanku dareemaan amaan. Kadib kaamirada kamaradaha jirka ee CCTV ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee fiidiyowga laga soo qaadan karo Habeenno iftiin hooseeya iyo qulqulka tooska ah qolalka kantaroolka.
Isbitaalka waa siyaabo fara badan oo boos gaar ah loo leeyahay, falanqeeyayaasha qaarkood waxay soo jeedinayaan in la isticmaalo kaamirada jirka inta lagu jiro qalliinka iyo muuqaalka duubista waxaa dib u eegi kara dhakhaatiir khibrad leh iyo dhakhaatiirta qalliinka cusub, waxaana loo isticmaali karaa inta lagu jiro tababarka caafimaadka si looga caawiyo ka fogaanshaha khaladaadka mustaqbalka. Laakiin Aasiya, waxaa jira xaalado badan oo dhakhaatiirtu ay ku qoraan qalliinka dhalmada isla markaana ay ku soo bandhigaan fiidiyowyo warbaahinta bulshada ah si ay u helaan dib-u-eegis iyo raacitaanno, sidaa darteed kaamirooyinka jirka xiran waa in ay ahaadaan kuwo sir ah oo waaxda daryeelka caafimaadku ay leeyihiin qawaaniintooda iyo xaddididooda isticmaalka kamaradaha jirka gaar ahaan kuwa Aagga degdegga ah.
Givot wuxuu yidhi “Marka mid loo soo bandhigo meel fagaare ah ma jirto rajo laga qabo in sirta la ilaaliyo, sidaa darteed cajaladaha fiidiyowga ee fiidiyaha dhexdiisa runtii maahan dhibaato. Laakiin marka qofku la xiriirayo bixiye daryeel caafimaad, waxaa jira rajo qarsoon, ”.
Tijaabada cusub ayaa ka dhacday cusbitaalka Berrywood, oo ay maamusho Northampton shire Healthcare NHS Foundation Trust. Shirkadda Calla waxay soo bandhigtay kaamirooyin muuqaal ah oo loo yaqaan '12 Reveal', oo ay xireen aqoonyahanno iyo kooxda amniga ee mid kasta oo ka mid ah shan qaybood oo bukaan-jiifka isbitaalka ah, tababarka kadib. Shaqaalaha iyo bukaanka labaduba waxay tixgeliyeen in
Qalabkayaga waxaa laga heli karaa suuqa xagga amniga isbitaalada iyo waaxaha kale
Maqal-duubo Cod-ku-Badal Cod
Mini WIFI / GPS / 3G / 4G Camera Worn Camera (BWC058-4G)
3G / 4G Camera Camera Wireless Body (BWC004-4G)
Sawir yar yar oo jilicsan oo wata qalab dibedda ah (BWC055)
Kaameerada jirka-Worn Camera (BWC004)
Xaqiijinta Jidhka WWW ee Qalabka WW ee Wareerka leh [No Screen Screen] (BWC059)
Kaameradda Worn Camera, Kaydinta Dibadda - Kaadhka SD 32GB-128GB (BWC043)
Saacado Dheeraad ah [16 Hrs] Rikoodh Saarid Muuqaal-Worn Camera (BWC061)
Xaqiiji Dhaqdhaqaaqa WWW ee Sawir leh Wareer leh [Screen LCD] (BWC060)
Sawirka CCD Button (BWC054)
Kareemada Mini Worn Camera - Super Video Compression (BWC058)
Qarsoodiga Casriga ah (Ammaanka Guriga)
Adeegsiga kaamerooyinka ee goobaha bukaan-jiifka ee caafimaadka dhimirka ayaa "faa iido" lahaa, ayay sheegeen cilmi-baarayaasha.
Inta badan dadka guud ahaan waxay ku heshiiyeen inay xirato kamarad jirka ah oo ka walwaleysa suurtagalnimada in qof aan ruqsad haysan, qolo saddexaad ay heli karto macluumaadkooda shaqsiyadeed, iyo inay ka walwalaan heyb sooc mustaqbalka la xiriira shaacinta maclumaadkooda. Inta badan dhakhaatiirta ayaa isku raacsan in kamaradaha jirka ay carqaladeyn doonaan xiriirka bukaanka iyo bukaanka laakiin ay ka walwalaan amniga macluumaadka bukaankooda. Isku soo wada duuboo, shacabka iyo dhakhaatiirta labaduba waxay doorbidayeen hirgalinta nidaamka kamaradaha jirka lagu xiro, iyagoo qiimeynaya in manaafacaadka suurta galka ah ay ka muhiimsan yihiin khataraha suurtagalka ah. Inta badan shacabka waxay rumeysan yihiin in mas'uuliyiinta ay tahay inay marin buuxda u lahaadaan macluumaadka halka shaqaalaha kalkaaliyaasha, farmashiistayaasha, shaqaalaha sheybaarka, iyo xirfadleyda kale ee daryeelka caafimaadku ay tahay inay lahaadaan qeyb ahaan.
Hadda waxaan siinayaa xoogaa baaritaan ah oo ay sameynayaan saraakiisha caafimaadka qaarkood.
Kadib tijaabooyin lagu sameeyay waaxaha caafimaadka dhimirka, dowlada waxay dooneysaa in dhakhaatiirta caafimadku adeegsadaan kaamirooyinka. 2014, adeegsiga kaamirooyinka jirka ee ay xirayaan kalkaaliyayaasha caafimaadka ayaa markii ugu horeysay lagu tijaabiyay labo waaxood oo ku yaal Broadmoor, oo ah isbitaal amni oo sareeya oo kuyaala Crowthorne, Berkshire. Muuqaalku wuxuu bixiyay caddaymo taageeraya dacwadaha kadib dhacdooyin rabshado wata halkaas oo sidoo kale la yareeyay dhacdooyinka weerarada lagu qaado shaqaalaha. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jiray “hoos u dhac ku yimid dabeecad xumada iyo dhaqanka gardarada ah”, sida laga soo xigtay af hayeenka West London NHS Trust, oo maamusha Broadmoor.
Jim Tighe, oo ah khabiir maareynta amniga maxalliga ah ee Galbeedka London NHS Trust, ayaa sheegaya in kaamirooyinka ay shaqaalaha ka dhigeen kalsooni badan. Waxaan dhowr jeer u adeegsan jirnay muuqaallo dib-u-eegis ah oo ku aaddan dhacdooyinka dhabta ah runtiina runtii waxay ahayd mid caawimaad leh in si cad loo arko loona maqlo waxa dhacay. Waxay gacan ka geysan kartaa yareynta muddada baaritaanka uu qaadanayo sababta oo ah waxaad heshay markhaati madax banaan, ayuu yidhi.
Markaa, dood dheer kadib, waxaan baranay in tikniyoolajiyad kasta ay leedahay waxoogaa wanaagsan iyo xumaanba, laakiin kaamirooyinka jirka xirtay waxay siinayaan faa iidooyin badan hoos u dhacyada kuwaas oo ka sii adkaan kara teknoolojiyadda. Dowladaha waa in ay siiyaan miisaaniyad dheeri ah oo ku soo roga tikniyoolajiyadda cusub waaxaha dowladda. Kalkaaliyayaasha caafimaadku waxay si joogto ah isu dhigaan xaalado adag oo suurogal ah. Kaamirooyinka jirku waxay bixin karaan caddeyn muuqaal ah oo muuqaal ah oo nolosha ah safka hore.
Anon., Nd SALIENT. [Khadka tooska ah]
Waxaa laga heli karaa: https://www.salientsys.com/industries/hospitals-healthcare/
Waaxda Shaybaarada Caafimaadka, A., 2018 Febraayo NCBI publmed.gov. [Khadka tooska ah]
Waxaa laga heli karaa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29331259
DeSilva, D., nd Muujin. [Khadka tooska ah]
Waxaa laga heli karaa: https://www.revealmedia.co.uk/5-ways-body-cameras-could-help-ambulance-staff
Hardy S, Bennett L, Rosen P, Carroll S, White P, Palmer-Hill S, (2017. [Khadka]]
Waxaa laga heli karaa: http://www.mhfmjournal.com/old/open-access/the-feasibility-of-using-body-worn-cameras-in-an-inpatient-mental-health-setting.pdf
Mei, TT, FEB 1, 2019, Xilliyada Xilliyada [Khadka tooska ah]
Waxaa laga heli karaa: https://www.straitstimes.com/singapore/health/body-worn-cameras-for-scdf-paramedics
Morris, A., May 30, 2019. Muuji & xiddig [Khadka tooska ah]
Waxaa laga heli karaa: https://www.expressandstar.com/news/health/2019/05/30/ambulance-staff-to-wear-body-cameras-as-40pc-of-paramedics-attacked/
Mulholland, H., Wed 1 May 2019. TAAGEERADA GUUD. [Khadka tooska ah]
Waxaa laga heli karaa: https://www.theguardian.com/society/2019/may/01/body-cameras-protect-hospital-staff-patients-violence-mental-health-wards
Kaameradda-Worn Camera: Waa farsamooyin caawin doona cisbitaalada ahaa kii ugu dambeeyey: Diisambar 3rd, 2019 by admin
2942 Wadarta Views 12 Views Maanta
Faa'iidooyinka Kaamiradda-Worn Camera ee Cisbitaalada